Mifarana ny laharan'ny anjaran'ny Hotel Taj Mahal Hotel malaza
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Mifarana ny laharan'ny anjaran'ny Hotel Taj Mahal Hotel malaza
Septambra 28, 2018
Nambara androany fa ny mpandraharaha ankehitriny, ny Indian Hotels Company (IHCL), dia hanohy hitantana ny Hotel Taj Mahal.
Tapitra ihany ny fisalasalana momba ny hoavin'ny Taj Mahal Hotel New Delhi.
Nambara androany fa ny mpandraharaha ankehitriny, ny Indian Hotels Company (IHCL), dia hanohy hitantana ny hotely. Ela ny fizotran'ny tolotra rehefa tapitra ny taona nifanarahana ny fifanarahana tany am-boalohany, ary mpanolo-tsaina vitsivitsy ihany no tonga nanatanteraka ny fepetra.
Taona maro taty aoriana dia voavaha ihany izany.
Andriamatoa Puneet Chhatwal, MD & CEO, IHCL, dia nilaza fa: "Faly izahay fa ny mampiavaka an'i Taj Mahal, New Delhi izay ampahany lehibe amin'ny firafitra ara-kolontsaina sy manan-tantara eto amin'ny renivohitra nasionaly, dia mbola hitoetra ho ampahany amin'ny Fianakaviana IHCL.
“Tianay ny misaotra ny mpanjifanay amin'ny fanohanany amin-kafanam-po sy ireo mpiasanay, izay nanolotra serivisy miavaka ho an'ny vahininay nandritra ny 40 taona.
“Manantena ny hampiasa vola amin'ny trano fandraisam-bahiny izahay ary hitondra izany amin'ny avo lenta amin'ny fandraisana vahiny indianina. Ny legiona Taj dia hanohy hanompo an'i Delhi amin'ny fomba kanto sy manintona. ”